Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda Diyaaradaha Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday Madaxweyne cusub
Mike Van de Ven ayaa loo magacaabay Madaxweynaha Shirkadda, isla markiiba dhaqangasha.
Gary Kelly, oo ah Guddoomiyaha iyo Maamulaha Guud ee Koonfur -galbeed, ayaa ku dhawaaqay isagoo ku hadlaya magaca Guddiga Agaasimayaasha Southwest Airlines in Sarkaalka Hawl -galka Mike Van de Ven, oo 59 jir ah, loo magacaabay Madaxweynaha Shirkadda, isla markaaba si dhaqso ah u dhaqan geli doonta. Van de Ven wuxuu qaadan doonaa mas'uuliyadaha dheeraadka ah ee Hantidhawrka Gudaha ee Shirkadda, Sii wadista Ganacsiga, Waxqabadka Degdegga ah, iyo hawlaha Maareynta Halista Ganacsiga.
Isbeddellada hoggaanka ayaa lagaga dhawaaqay Southwest Airlines.
Tom Nealon wuxuu go’aansaday inuu si dhaqso leh uga fariisto waajibaadkiisa Madaxweyne.
Shirkadda Southwest Airlines ayaa ku dhawaaqday isbeddel hoggaamineed maanta.
Tom Nealon, oo 60 jir ah, ayaa go'aansaday inuu si dhaqso leh uga fariisto waajibaadkiisa Madaxweyne, laakiin wuxuu sii wadi doonaa inuu u adeego Shirkadda sidii la -taliye istaraatiiji ah, isagoo xoogga saaraya ugu horrayn joogtaynta bay'ada ee diyaaradda iyo qorshaha dhimista qiiqa kaarboonka. Nealon wuxuu qabtay jagooyin hoggaamineed oo badan intii uu la shaqeynayay diyaaradda, oo ay ku jiraan Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta Istaraatijiyadda & Hal -abuurka laga soo bilaabo 2016 illaa 2017, Agaasimaha Guddiga Koonfur -Galbeed 2010 ilaa 2015, iyo awood la -taliye ahaan Madaxweyne Ku -xigeenka Sare iyo Sarkaalka Warfaafinta ee 2002 ilaa 2006.
"Waxaa sharaf ii ah inaan u adeegay Koonfur -galbeed sannado badan dhowr meelood oo kala duwan, gaar ahaanna inaan ahaa Madaxweynaha shirkadda duulimaadyada ugu wanaagsan ee meheradda," ayuu yiri Nealon. "Waxaan rajeynayaa inaan sii wado u-adeegidda iyo ka-talinta Koonfur-galbeed qorshayaasha istiraatiijiyadeed, iyo tan ugu muhiimsan, qorshayaasha joogtaynta deegaanka ee muddada dheer ee diyaaradda."
Gary Kelly, Gudoomiyaha iyo Maamulaha Koonfur Galbeed, ku dhawaaqay magaca Southwest Airlines Guddiga Agaasimayaasha oo Sarkaalka Hawlgalka Mike Van de Ven, oo 59 jir ah, loo magacaabay inuu noqdo Madaxweynaha Shirkadda, isla markaaba dhaqangasha. Van de Ven wuxuu qaadan doonaa mas'uuliyadaha dheeraadka ah ee Hantidhawrka Gudaha ee Shirkadda, Sii wadista Ganacsiga, Waxqabadka Degdegga ah, iyo hawlaha Maareynta Halista Ganacsiga.
"Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo Tom tabarucyadiisa aan la tirin karin ee ku aaddan sababta ay u tahay Southwest Airlines sanadihii la soo dhaafay - way badan yihiin oo lama qiyaasi karo. Waan ka mahadcelinayaa in Tom sii wadi doono u adeegidda la taliye istaraatijiyadeed. Waan ku faraxsanahay Mike markii uu qabanayo kaalintiisa cusub ee Madaxweyne, marka lagu daro COO. Mike waa hoggaamiye karti iyo hufnaan leh sida qof la helo, wuxuuna si toos ah uga qayb qaatay guusha Koonfur -galbeed muddadii 28 -ka sannadood ahayd ee uu u adeegayey Shirkadda iyo Dadkeenna.
"Dadaallada kala -guurka ee uu hoggaaminayo Madaxweyne ku -xigeenka Fulinta iyo maamulaha soo socda Bob Jordan aad bay u wanaagsan yihiin, iyadoo taasi sii socoto, waxaan qaadnaa tillaabooyin aan ku beddeli karno doorka warbixinta si aan ugu diyaarinno Bob inuu qabto doorka Maareeyaha 1 -da Febraayo, 2022," ayuu yiri Kelly.
Markay kala -guurku sii socoto, Kooxaha Maaliyadda, Ganacsiga, Sharciga & Xeer -dejinta, Hawlgallada, iyo Teknolojiyadda u warramayay Kelly ama Nealon ayaa hadda u soo warramaya Urdun, sidoo kale isla markiiba waxtar leh.
"Anigoo ku hadlaya magaca Guddiga Agaasimayaasha, waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Tom muddadii ku dhawaad ​​shanta sano ahayd ee uu Madaxweynaha ahaa iyo in ka badan 15 sano oo uu u adeegayey Shaqaalahayaga Diyaaradaha Koonfur Galbeed, Macaamiisha, Saamilayda, iyo Bulshooyinka aan u adeegno," ayuu yiri Agaasimaha Hoggaaminta Diyaaradaha Koonfur Galbeed William Cunningham. "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno kursi hoggaamineed oo karti iyo karti leh Southwest Airlines, waana ku faraxsanahay ku dhawaaqista Mike Van de Ven oo ah bedelka Tom."